အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသည်းကွဲသောနေ့- Myanmar in Singapore
Posted byှရွှေအိမ်စည် on August 1, 2011 at 12:48am
အချစ်တွေ အများကြီးရလိုက်လို့ ဘ၀ဟာ ပြီးပြည့်စုံသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။အချစ်တွေ အများကြီးပေးဆပ်လိုက်ရလို့ ဘ၀ဟာ ပိုတန်ဖိုးရှိသွားတာပါလို့ ဆောင်ပါးလေးတစ်စောင်မှာ
အချစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး လူတွေဟာ ကိုယ်လောက် ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာ ချစ်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုပြီးခံယူချင်ကြတယ် ယူဆတတ်ကြတယ်။
အဲဒီအယူအဆတွေနဲ့အတူနောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေဖြစ်လာရင်လဲ အချစ်ကြီးရင် အမျက်ကြီးတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်သမျှပြဿနာအပေါ်မှာ အရမ်းခံစားတတ်ကြတယ်။
ရည်းစားနဲ့ကွဲကြတဲ့အခါမျိုးမှာပိုဆိုးပါတယ်...။
အရမ်းခံစားပြီး ကိုယ့်ကိုကို ဘယ်လိုမှမထိမ်းနိုင်ဘူးဆိုပြီး ရက်ရက်စက်စက်ကိုအသည်းကွဲတယ်လို့ ယုံကြည်နေမိတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် လက်ရှိရပ်တည်နေတဲ့ ဒီနေရာကပျောက်ကွယ်သွားချင်တယ်..။
တချို့ ဆိုသတ်သေရမလို ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်(တကယ်အချစ်ကြီးတတ်ခဲ့ ရင်ပေါ့)။
အဲသလိုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင် အဓိကယုံကြည်ထားရမှာက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘာသာရေးအဆုံးအမတရားနဲ့ အရင်ဖြေရပါမယ်..။
ခွင့်လွတ်သည်းခံ စိတ်ကိုမွေးပြီးမှစိတ်ထိမ်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့ ပါပဲ။
ကျမတို့ ကိုရီးကားတွေ ထဲ ကလိုအော်ကြည့်မယ်...။ပင်လယ်ကမ်းစပ်..ဒါမှမဟုတ်..လူသူရှင်းတဲ့ နေရာတွေ ၊ဒါမှမဟုတ်မိုးပျံဗူပေါင်းတွေ လွတ်တင်ရင်း မကျေနပ်တာတွေ ကို ဆိုပြီးအော်လိုက်မယ်...၊ သံကုန်ဟစ်ကြည့်မယ်ပေါ့။ မရသေးရင်ထပ်အော်မယ်..ထပ်..ဟစ်ကြွေးပစ်လိုက်မယ်...။ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားကြည့်ကြပါမယ်...။နောက်ဆုံးမအော်နိုင်အောင်မောသွားတဲ့ အထိပေါ့။ (အိမ်အနီးနားမှာတော့မလုပ်မိစေနဲ့ နော်......သိတယ်ဟုတ်...အတင်းပြောကြမှာစိုးလို့ ပါ) ပြီးရင်စိတ်ကြိုက်အစားတွေ စားပစ်လိုက်မယ်(တနေ့ တာပဲ..စားပစ်မှာပါ...နို့ မို့ ဝလာမှာစိုးလို့ ပါ)
နောက်ပြီး ဘာလုပ်စရာရှိလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။စဉ်းစားပြီးရင် အလုပ်ကိုမြန်မြန်လုပ်။ အ၀တ်တွေ လျော်မယ်..။ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိရင်တောင် ကိုယ့်နေရာကိုယ့်အိပ်ခန်းလေးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေါ့။ သီးချင်းတွေ ဖွင့်ပြီး မြန်မြန်လုပ်။လုပ်ရင်းနဲ့ သီးချင်းတွေ လိုက်အော်ဆိုရင်းနဲ့ ဒဏ်ရာတွေသက်သာလာပါလိမ့်မယ်။
တချို့ ယောက်င်္ကျားလေးတွေ ကအသည်းကွဲရင်(ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေရင်) အရက်သောက်တယ်ဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
မိန်းခလေးတွေ ကတော့အသည်းကွဲ ရင်သောက်စရာမရှိဘူးနော်...ကျစရာမျက်ရည်ဘဲ ရှိကြပါတယ်။။ ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့အယူအဆတခုပါပဲ။
တကယ်လို့ အသဲကွဲနေရင် ကိုယ့်အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးလုပ်ပါ။
အဲဒါဟာမင်း..အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ ဖြေဆေးတခုပါပဲ။ ပြီးတော့ သူကိုမှ မရရင်ငါတော့သေတော့မှာပအတွေး ကိုစွန့် လွတ်ရပါမယ်..။
ကိုယ့်ချစ်သူကိုဘာနဲ့ မှ အစားထိုးလို့မရပါဘူးဆိုပြီးထင်နေတာ ဒါဟာ....တကယ်တော့မမှန်ကန်ပါဘူး။ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဗိုက်ထဲမှာ တကယ်ရှိနေတဲ့ အတွင်းကလီစာကျောက်ကပ်..၊အသဲနှလုံးကို၊ .တောင်အစားထိုးပြီးကုသနေပါပြီ။
(မလို တာဖယ်လိုတာချန်ပေါ့...အသည်းကွဲ ရင်လည်း..ပြန်ချုပ်လို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်)
ခြေပြတ်လက်ပြတ်သွားရင်တောင်..အစားထိုးကုသနိုင်ပြိး..အကြောသေနေတဲ့ ခြေလက်တွေ တောင်လျှပ်စစ်နဲ့ ပြန်ရှင်နိုင်တယ်လေ..ဟုတ်..။
ဒါပေမယ့် လူဆိုတာကလည်းညာတာလေးကိုပဲကျေနပ်နေတော့ ညာပြီးရင်ညာပေါ့လေ.....
နောက် ချစ်သူပြောင်းမယ်...တယောက်၊နှစ်ယောက်၊သုံးယောက် ပြောင်းပြီးချစ်လာရင်တော့ ဒါတွေကိုတဖြေးဖြေးနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
တော့အမှတ်တယရှိသင့်ပါတယ်...နေ့ ထူးနေ့ မြတ်တိုင်းရှိသလို....နုနယ်လွန်းတဲ့ အသည်းလေးကွဲသွားတာကိုလည်း..အမှတ်တယတော့ရှိသင့်ပါတယ်...
ကမ္ဘာပေါ်မှာမသတ်မှတ်နိုင်သေးတဲ့ မရှိသေးတဲ့ နေ့ လေးတစ်နေ့ ကိုတော့ ဧဒင်ဥယျာဉ်က သတ်မှတ် ပေးစေချင်ပါတယ်..။..
အသည်းကွဲ တာကို..သူငယ်ချင်းတို့ ရော...
့်ချစ်သူကို အသည်းကွဲ တိုင်းအမှတ်ယမိနေ ဖို့ တော့နေ့လေးတစ်နေ့ လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား...
..ကျမဧဒင်အတွက်..နေ့ နေ့ ညညစာတွေ ရေးပါတယ်. .ချစ်သူအတွက်..ချစ်သူရေ..နင်နေကောင်းလားဆို တြ့ စာတစ်စောင်တောင်မရေးပါဘူး... ငါ့ချစ်တာ..သူသိတာဘဲလေ..ဆိုပြီးနေခဲ့ လိုက်ပါတယ်..... သူနားလည်မှာဘဲလေ..ဆိုပြိးနေခဲ့ ပါတယ်..။ကျမ ပေခ်ျ့ ကျမမေလ်းတွေ ကရည်းစားစာတွေ မိတ်ဆက်စာတွေ လည်းသူဝင်ဖတ်နိုင်တာဘဲလေ..ကျမကတော့..ကျမမဖောက်ပြန်တာ...သူလည်းသိတယ်..
ချစ်သူများနေ့ လို့ သတ်မှတ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရိလ၁၄ ရက်နေ့ မှာတော့..ချစ်သူဆီ ကလမ်းခွဲ စာကျမရရှိခဲ့ ပါတယ်။
ကျမဘလော့ တွေအစောင်ပေါင်းများစွာရေးခဲ့ ပေမယ့်..ချစ်သူဆီ..စာတစ်စောင်မှမရေးမိတာအပြစ်လား
စာရေးခြင်းကိုတော့ကျမမစွန့် လွတ်နိုင်ပါဘူး.....ဒါဆိုကျမကတဘက်က..ချစ်သူကိုစွန့် လွတ်လိုက်ပါတယ်..။
နှစ်တိုင်းလတွေ လတိုင်းမှာ..အမှတ်တယနေ့ တွေ သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်..ကျမလိုဘဲ...ချစ်သူစွန့် ပစ်ခံ ရသူတွေအတွက်တော့မှတ်မှတ်ယယ နေ့ လေးတနေ့ တော့လို အပ်ပါတယ်....
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသည်းကွဲသောနေ့ လို့ အဆိုတော်တွေ ကသီဆိုထားတယ်....
ကျမအတွက်လည်း.....အသည်းကွဲ သွားတဲ့ နေ့ .....ဧဒင်ဆိုင်ရာအသည်းကွဲသောနေ့ လေးတစ်နေ့ တော့သတ်မှတ်ပေးသွားခဲ့ ပေးပါ.......
သူ့ အလိုလိုကွဲ သွားတာလား.....
ဧဒင်မှာအသည်းကွဲသွားသော နေ့လေးတစ်နေ့ 
ငါ့ကနင့်ကို...ရင်နဲ့ အမျှချစ်ခဲ့ ရသူမို့ လို့ ပါ..။
FreeVideoCoding.com ဒါကြောင့်..ကျေးဇူးပြုပြီး..ဧဒင်မှာအသည်းကွဲသောနေ့ လေးတစ်နေ့ တော့သတ်မှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်............
Comment by saithawtartun@gmail.com on September 11, 2011 at 7:34pm ဟင်း...အစ်မကလဲ.....စာလေးတစ်စောင်တောင်မရေးတာကတော့...လွန်လွန်းပါတယ်...
ဘာကြာတာမှတ်လို့....... Comment by yon ko san on August 13, 2011 at 6:49pm မရယ်...အခုရော ဘယ်လိုနေသေးလဲဟင်....သက်သာသွားပြီလား... RSS